Afaka mahazo miverimberina ve aho rehefa mandany fotoana be loatra?
Azo atao ve ny miverina amin'ny rindrankajy ho an'ny fampiroboroboana ny tranonkalanao? Azonao atao ve ny mandefa bakolàlana nefa tsy mandany fotoana be loatra sy ezaka be loatra? Ny valiny dia eny, mazava ho azy, azonao atao. Ny fanaovana izany amin'ny tenan-dry zareo anefa, dia matetika toa asa goavana tokoa ho an'ny olona maro. Saingy ny marina dia afaka mamerina ny rindran-damosinao ianao, nefa tsy manao asa mavesa-danja sy miasa mafy. Ireto ambany ireto ny toro-hevitra maromaro momba ny fomba hahazoana ny rindran-damina tsara tsy misy vola amin'ny vola tokana. Raha ny marina, ny fanamby dia tsy sarotra satria mety hijery ny mijery voalohany. Nahoana? Andeha hojerentsika ity dingana ity.
Tip 1 - Andramo ny "Manaraka" Blogging
Ny ankamaroan'ny, ny lionan'ny liona blôgy dia mampiasa ny " araho ny toetoetran'ny HTML amin'ny rohy rehetra manondro ivelan'ny pejin'ny blôgy. Mazava ho azy, vita amin'ny tanjona izany - mba hisorohana ny fanehoan-keviny amin'ny blaoginy noho ny tsy fisian'ny rindrambaiko mifandraika amin'ny habaka zero. Ary eto ny fotoana hahatongavana amin'ny bilaogy "Do Follow", izay mijanona mazava avy amin'io fetra iombonana io. Noho izany, maninona no tsy hampiasa ireo bilaogy "Do Follow" ireo ho tombontsoanao manokana, sa tsy izany? Amin'izany fomba izany, dia tadidiko fotsiny ny mikaroka amin'ny alalan'ny lisitr'ireo olona malaza indrindra sy mampiasa azy ireo mba hanomboka avy hatrany.
Toro 2 - Mandehana amin'ny blaogin'ny Guest
Mazava ho azy fa tsy maintsy hampiasa vola kely ianao hanoratana ny votoatiny izay hapetraka ao amin'ny tranonkala fahatelo. Etsy andaniny, ny fotoananao no hany fomba "handoavana" ho an'ireo backlinks kalitao tonga any amin'ny toerana malaza sy mahazatra ao amin'ny Internet. Etsy andaniny anefa, aza hadinoina mihitsy ny ezaka nataonao tamin'ny bilaogy vahiny. Mahatsiaro fotsiny fa ny fanaovana izany dia tsy vitan'ny hoe mahazo tombony fotsiny ianao, fa mampiseho koa ny tranonkalanao mainty sy ny fahefanao ho an'ny mpihaino marobe amin'ireo mpampiasa liana.
Tip 3 - Get Backlinks amin'ny tranonkala E-commerce
Midika izany fa mety hitondra tombony lehibe amin'ny sehatra e-varotra samihafa ianao.Mifandray amin'ny eBay, Amazon, Etsy, na sehatra hafa an-tserasera toy izany ve ianao? Raha ny tranokalanao mainty dia manao fifanarahana amin'ny sehatry ny varotra e-commerce, dia tsidiho fa ny pejy momba ny vokatrao dia misy rohy manondro ny pejy web-n'ny orinasa na lahatsoratra bilaogy manohana anao.
Tip 4 - Ampiasao ny herin'ny fampahalalam-baovao sosialy
Raha ny tombotsoam-bahoaka no jerena,. Ataovy azo antoka tsara ny mamerina manavao sy manavao ny mombamomba anao rehetra amin'ny sehatra media malaza amin'ny aterineto toy ny Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, sns.
Tip 5 - Fanontaniana & Valiny
Ho tsara hevitra ny ho tonga manam-pahaizana amin'ny tsenanao toy ny sehatry ny indostria manokana. Jereo ny tranonkala malaza sasany manao dinidinika samihafa ao amin'ny sehatra fanontaniany sy valiny (ohatra Quora). Ireo tranonkala toy izany dia tena ilaina tokoa mba hahazoana rohy mankany amin'ny tranokalanao na blôginao.
Tip 6 - Ataovy Bait Posts
Aza misalasala manomboka manoratra lahatsoratra linkbait. Eto aho dia manome fampiantranoana bilaogy mahasoa izay manome ny lanjany ho an'ny mpampiasa azy ary mahazo azy ireo "feno" miaraka amin'ireo angon-drakitra an-taonany toy ny toro-làlana azo antoka, lesona, fanadihadiana, fanadihadiana, toro-hevitra & tricks, ary ny sisa. Ny zava-drehetra dia fototra - rehefa mamorona votoaty maimaim-poana ianao mametraka ny fihetseham-po sy ny filan'ny mpamaky anao, dia ho gaga ianao mahita olona maro maneho sy mampifandray anao Source .